Indlu esandula ukulungiswa kwichibi lakho-ukuloba i-Rainbow salmon
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguSofia
Indawo yeLake, indlu esanda kulungiswa nje ngeemitha ezingama-80 ukusuka echibini lethu.
Umgangatho omkhulu weplanga onetafile kunye neendawo zokuhlala.
Ulwandle oluncinci lwesanti.
kunye nejethi edadayo, amanyathelo okuhlamba akhoyo.
Ukuloba kubandakanywa, i-salmon ye-Rainbow efakwe.
Isikhephe sokubhexa sibandakanyiwe.
Ikhitshi inendawo yokugoqa, enokuthi itsalwe ngokupheleleyo kwicala, ukuvula okukhulu kwi-terrace.
Inqanaba 1 - ikhitshi, igumbi leTV, igumbi lokuhlambela.
Umgangatho 2 -Igumbi lokuhlala elinendawo yomlilo, balcony, amagumbi okulala ama-3.
Wifi, apple tv.
Wamkelekile ukonwabela kwindlu esanda kulungiswa ngokupheleleyo, kwi-Småland entle eneendawo ezintle zendalo, ihlathi kunye nechibi.
4.97 ·Izimvo eziyi-107
I-Småland kunye nobukumkani beglasi yonke, i-landscape enamachibi amaninzi kunye nehlathi elininzi. Isixeko saseVäxjö sikwiikhilomitha ezi-3 kuphela ukusuka endlwini, ukuba ufuna ukuya kufumana ikofu okanye ube nosuku oluncinci lokuthenga. Kukwakho neecafe ezininzi zelizwe ezijikeleze emaphandleni. Ukunyuka intaba, ukukhwela ibhayisekile, ukukhwela iphenyane.
Ungasifumana nge-imeyile kunye nefowuni ephathwayo.
Yiza nalakho amashiti / ilinen yebhedi kunye neetawuli. Ukuba awunalo ithuba lokuzisa eyakho, kunokwenzeka ukuba urente nge-SEK 80 ngomntu ngamnye. Zive ukhululekile undazise kwangexesha ukuba ufuna ukurenta izinto zokulala.
Yiza nalakho amashiti / ilinen yebhedi kunye neetawuli. Ukuba awunalo ithuba lokuzisa eyakho, kunokwenzeka ukuba urente nge…